Transportgbọ njem ọha na Malatya bụ n'efu N'oge ememme - RayHaber
HomeTurkeyEastern Anatolia Region44 MalatyaAtiongbọ njem ọhaneze na Malatya n'efu
09 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 44 Malatya, Eastern Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey, Trolley ụgbọ ala 0
malatyada akwụghị ụgwọ n'oge ezumike ọha
Latgbọ njem ndị isi obodo nke Malatya Metropolitan Municipal (MOTAS) ga-enye ụmụ amaala ọrụ njem ụgbọelu n’oge Eid al-Adha.
11 - 14 ụgbọ ala ga-enye ọrụ n'efu na ụzọ niile ụmụ amaala ga-eleta di ha, ndị enyi, ndị ikwu na ebe a na-eli ozu n’udo n’oge emume Eid al-Adha nke a ga-eme n’etiti August 2019 ụbọchị.
Selahattin Gürkan, Onye Isi Obodo nke Malatya Obodo ukwu; “N’oge Eid al-Adha, ụgbọ ala anyị nile (ụgbọ ala na tramb) ga-enye ụmụ amaala anyị ọrụ n’oge Eid al-Adha, n’ikwekọ na nghọta nke obodo na-elekọta mmadụ iji mee ka ụmụ amaala anyị na-eji ezumike ha n’udo na udo.”
Na mgbakwunye, 10 June 2019 Satọde 'Arefe' n'ụbọchị site na ebe a na-eli ozu MOTAS City na Alibaba na Karababa site na ịtụkwasị ụgbọ elu ndị ọzọ, a ga-enye ndị nleta ili ozu n'efu.
Transportgbọ njem ọhaneze N'oge Bayram N'oge Kayseri n'efu 09 / 08 / 2019 Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç mara ọkwa na ụgbọ njem ọha na-agaghị akwụ ụgwọ n'oge Eid al-Adha. Onye isi obodo Büyükkılıç kwuru na ụmụ amaala na-eji bọs na usoro ụgbọ oloko ga-erite uru site na ụgbọ njem n'anaghị ego. Onye isi obodo nke Obodo ukwu Memduh Büyükkılıç kwuru na ngwa n'efu na njem ga-amalite na 00.00, nke jikọtara ụbọchị mbụ nke Eid al-Adha na ụbọchị mbụ nke Eid al-Adha, na 14, ụbọchị ikpeazụ nke Eid al-Adha, ga-akwụsị na 24.00 na Wednesde. Onye isi ala Memduh Büyükkılıç, ngwa n'efu na ụgbọ njem ọha, naanị ụgbọ ala Kayseri Metropolitan na ụgbọ ala ọha ga-aba uru na ntinye akwụkwọ ahụ kwuru na bọs nkeonwe.
Transportgbọ njem ọhaneze N'oge Bayram N'oge Bursa n'efu 09 / 08 / 2019 Onye isi obodo Bursa Alinur Aktas, ụmụ amaala, Eid al-Adha dị n'udo ma dịkwa mma iji bie ndụ n'obodo niile. Onye isi obodo nke Bursa Metropolitan Municipal Alinur Akta the kwuru na obi ụtọ Eid al-Adha bi na obodo ahụ dum wee kwuo, olarak Dị ka Bursa Metropolitan Municiparies, anyị emeela ihe niile dị mkpa maka ụmụ amaala anyị iji nọrọ Eid al-Adha mee nke ọma, udo na nchebe. Oge ezumike bụ achicha nke ịdị n'otu na ịdị n'otu. Obi anyị dị n’otu nke nwanne, ọbụbụenyi na ịdị n’otu na-ewusi n’ụbọchị ndị a. Ana m ekele Eid al-Adha, ma na-eche na ụbọchị ndị a mara mma ga-eweta chi ọma na Bursa, mba anyị na mmadụ niile. " N'ime oke nke Bursa Obodo Ime Obodo, Sistem
Ationgbọ njem ọha na Kahramanmaras 08 / 08 / 2019 Kahramanmaraş mepere emepe kwuru n’oge Eid al-Adha ga-ebu ndị njem ụgbọ ala na-enweghị isi n’efu. Ngalaba Transportgbọ njem na Kahramanmaraş Metropolitan na-abịaru Eid al-Adha tupu ozi ọma abịa. Na nkwupụta, 4 kwa ụbọchị n'oge ụgbọ ala gọọmentị Eid al-Adha ga-ebu ndị njem na-ekwu n'efu. Citizensmụ amaala na-eme njem dị mma na nke dị jụụ n’aha ọrụ ahụ kwuru na-aga n’ihu, kwuru na e mere ihe ndị dị mkpa iji gbochie nsogbu ọ bụla na njem.
Gbọ njem na Eskisehir N'efu 09 / 08 / 2019 Obodo Eskişehir Metropolitan, na mkpebi otu Mgbakọ Mịnịstrị, yana Ramadan Oriri nke Eid al-Adha na ụgbọ ala nke obodo ga-arụ ọrụ n'efu. Na mgbakwunye, ụmụ amaala ga-enwe ike ịme ohere na-adọba ụgbọala n'okporo ámá maka ebumnuche nke oriri. N’oge Eid al-Adha, Mịnịstrị na-ahụ maka obodo, nke ga na-arụ ọrụ mgbe oge ụfọdụ gafeworo, emeela njem na ebe a na-adọba ụgbọala na-akwụghị ụgwọ maka ụmụ amaala na-eme nleta ha dị afọ. Na nnọkọ July nke ọgbakọ ime obodo, ejiri otu olu kpebie na tram na ụgbọ ala gọọmentị agaghị akwụ ụgwọ n'oge Eid al-Adha. Ọzọkwa ụmụ amaala…
Ụlọ EGO na Ankara Free 04 / 07 / 2016 Bọọl na-aga na Ankara Free n'oge ememme ahụ: Ankara Obodo ukwu, ONYE na ASK we were ihe niile dị mkpa na ememe Ramadan. Ndị mmadụ Ankaralı, bọs ndị na-emekọrịta onwe ha ga-enwere onwe ha n'oge ezumike, metro na Ankaray ga-akwụ ụgwọ. 5 3 ga-amalite na Ememe Ramadan, 153 EGO bọs ga-enwe ike ịnya na-enweghị eji Ankarakart n'ụbọchị, Metro na Ankaray njem ga-akwụ ụgwọ. Obodo ukwu, mpaghara niile na ntụziaka zuru oke ga-arụ ọrụ n'oge ememe ahụ. ALO 7 'Blue Table', 24 ụbọchị XNUMX na-arụ ọrụ n'ụbọchị, Ankara ga-anọgide na-enweta ọchịchọ, arịrịọ na mkpesa. ASKI General Directorate Channel Fault Team Genel
Ego na-akwụ ụgwọ n'efu 16 / 06 / 2017 Akwụ ego, Free n'oge Ememe: Mayakarị Mayor Melih Gokcek, n'oge Ememe Ramadan nke isi obodo ahụ, ụgbọ ala EGO site na njem na-enweghị ego, nyere ozi ọma na ha nwere ike ịga na ụzọ dị mma. "Free ụgbọ njem nke Day" n'ihi na oge mbụ na Turkey, Ankara Metropolitan Mag President eti na malitere dị ka a obodo, "free njem ngwa n'ememe ubi a na omenala nke ala, na-n'oge 3-ụbọchị Eid al-Fitr (25 Sunday, June, 26 Monday, June, 27 Tuesday, June aga n'ihu,) o kwuru. N'oge ezumike, ụmụ amaala nwere ike ịga na-eli ozu na ndị ikwu na-enweghị nsogbu, ma ha nwere ike ịnweta ebe ha chọrọ.
Ụgbọ ala ndị na-emekọrịta ihe ga-enye ọrụ n'efu 25 / 08 / 2017 Ụgbọ ala ndị na-agafe agafe ga-ebu ndị nwe obodo na Eid al-Adha dị ka nnwere onwe dika ezumike ọ bụla. Ndị Ankara, 4 n'oge ụbọchị Eid al-Adha; (1 September, Friday, Saturday, September 2, 3 September 4 September Sunday na Monday) na ụgbọ ala na-enweghị na-eji ego Ankarakart; gaa na-eli ozu, ndị ikwu na ndị enyi n'efu. Ankaralılar, dị ka mgbe niile "Ego Mobile" ngwa na ụgbọ ala na-akwụsị na hour, nke ga-abịa na oge, na ngwa ha download ha mobile phones, na internet, olu Ịpị, na-amụta site na-akpọ ma ọ bụ SMS nanị 153. Ego na Bus, mfe ACCESS na-eli ozu Metropolitan Municipality General Directorate nke Ego, n'èzí isi obodo ndị mepere emepe na iga, ...
Ego 50 na Bursa 29 / 05 / 2019 BURULAŞ, òtù njem nke Bursa Municipality, kwupụtara na a ga-eji ego 50 kwụọ ụgwọ ụgbọala niile. Bursa Metropolitan Municipality transportation organization BURULAS mara ọkwa na a ga-enwe mbelata njem n'oge Ememme Ramadan. Ụgwọ ego ego ezumike nke BURULAŞ kwupụtara dị ka 50. a dere na nkwupụta si BURULAŞ "n'oge Eid al-Fitr, 4-5-6 2019 ụbọchị June Bursa ụmụ amaala na obodo ọha iga nwere ike irite uru na 50 percent discount niile anyị kpọrọ njem mara ọkwa" nkwupụta kwuru.
Ụgbọ njem na Eskisehir nwere onwere n'oge ememme Ramadan 17 / 05 / 2019 Eskişehir Metropolitan Municipality, Council Council na-akwado otu mkpebi ahụ n'oge Ememe Ramadan nke trams na bọs ga-eje ozi n'efu. Site na mkpebi nke Metropolitan Municipality Council na-eme ka ụmụ amaala na-eleta nleta ha dị mfe, 3 ga-arụ ọrụ trams na bọs nke Metropolitan Municipality n'ụbọchị ahụ na Eskişehir.
Latgbọ njem ọha nke Malatyada
Ationgbọ njem ọhaneze na Malatyada n'efu
Ego 50 na Bursa
Ụgbọ njem na Eskisehir nwere onwere n'oge ememme Ramadan